Ndị ọzọ na -ebuputa ihe na -ebubata ihe na ụlọ nrụpụta - ndị na -emepụta ngwa ọrụ mkpọpu mmiri ndị ọzọ
Mgbe mmiri mgbali na ume ụfọdụ batara na ntụgharị, rotor na -agbagharị gburugburu axis stator nke apịtị nrụgide na -akwalite iji nye ike maka ntakịrị mkpọtụ. Ngalaba Ike bụ obi igwe na -egwu ala, nke na -ekpebi arụmọrụ dị ike.
Ihe na -eme ihe bụ nke mejupụtara roba na roba siri ike, nke a na -eji na usoro nha dị iche iche mgbe a na -egwu ala. Anyị na -amụ ma na -enyocha ihe ndị na -agbanwe agbanwe na ike ijikọ n'etiti ọla iji chepụta ihe mkpuchi rọba ọkachamara nke nwere ike nwee ike gboo mkpa ndị ahịa maka ngwaọrụ ịtụ ihe mgbe ha na -egwu ala.
TC agba na -anabata usoro sintering n'ozuzu nke nnukwu ọkụ ọkụ dị elu, usoro sintering pụrụ iche
Na -ejikwa ịdị mma nke akụrụngwa iji hụ na carbide ciment na carbide tungsten dabara na ụkpụrụ ojiji.
Companylọ ọrụ anyị na -emepụta nozzles dị iche iche nwere akụkụ dị iche iche iji gboo mkpa ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ maka obere nozzles.
Mgbakọ nnyefe, nke ejikọtara na njedebe ala nke rotor, na -ebugharị ntụgharị na iyi nke ngalaba ike na -eme na oghere na -ebugharị na mbanye. Ọ na -akwụkwa ụgwọ mmegharị ahụ dị iche iche nke nri rotor ma na -amịda ntụkwasị obi ya.
A na -ebufe ntụgharị site na ogwe transmisson, nke etinyere ya na njikọ ụwa niile na njedebe ọ bụla iji nweta ngagharị eccentric nke rotor. Ma nkwonkwo ụwa niile juru na griiz ma kaa ya akara ka ọ gbasaa ndụ ha.
A na-ahazi diamond polycrystalline (PDC), nke a makwaara dị ka diamond mmadụ mere na diamond sịntetịkị iji nye ọrụ mbelata dị elu ma bulie arụmọrụ downhole nke bit PDC.